Jose Mourinho Oo Badalay Aragtidiisii Lionel Messi Ee Abaal Marinta Ballon d’Or Ee Sanadkan 2019. - Gool24.Net
Jose Mourinho Oo Badalay Aragtidiisii Lionel Messi Ee Abaal Marinta Ballon d’Or Ee Sanadkan 2019.
Abaal marinta Ballon d’Or ayaa sanad kasta ah mid dood badan abuurta isla markaana ay shaqsiyaad kubbada cagta magac ku lihi sii saadaliyaan cida ku guulaysan karta.
Jose Mourinho ayaa badalay aragtidii hore ee uu ka bixiyay saadaasha Ballon d’Or taas oo uu hore ugu saadaaliyay in Lionel Messi uu ku guulaysan doono.
Laakiin hadda Jose Mourinho ayaa shaki galiyay haddii uu Messi u qalmo in uu sanadkan ku guulaysto abaal marinta xidiga sanadkan ugu fiican ee hanan kara abaal marinta Ballon d’Or.
Markii uu Cristiano Ronaldo ka hadhay Champions League ayuu Jose Mourinho cadeeyay in Lionel Messi yahay xidiga ugu cad cad ee ku guulaysan doona abaal marinta Ballon d’Or.
Laakiin Jose Mourinho ayaa hadda shaki galiyay haddii uu Messi u qalmo abaal marinta Ballon d’Or kadib in uu isna markiisa ka soo hadhay UEFA Champions League.
Sanadihii ugu danbeeyay waxaa abaal marinta Ballon d’Or ku soo guulaysanayay ciyaartoy soo hantay koobka Champions league waana arinta uu Mourinho shakiga u galiyay in Messi uu markii lixaad ku guulaysan doono abaal marintan.
Jose Mourinho oo shaki galinaya ku guulaysiga Messi ee Ballon d’Or ayaa yidhi: “Anigu shaki ayaan ka qabaa in isagu uu sanadkan u qalmo Ballon d’Or, sababtoo ah waxa uu ku guuldaraystay Champions League”.
Laakiin qaar ka mid ah jamaahiirta Barcelona ayaa aflagaado u gaystay Jose Mourinho iyaga oo ku tilmaamay doqon ay nasiib wanaag tahay in aanu codayn doonin.
Inkasta oo uu Lionel Messi 48 gool ku soo dhaliyay 48 kulan oo uu xili ciyaareedkan u soo saftay Barca, haddana Mourinho ayaa u arka in rajadii Messi ee Ballon d’Or ay hoos ugu dhacday fashilkii Barca ee kobka Champions League.